Iindaba malunga neXiaomi - Mi: ukwazisa, ukuhambisa izixhobo, iipilisi kunye nokunye - i-Androidsis | I-Androidsis (Iphepha 4)
IXiaomi Mi 8 Lite iya kufumana imo yasebusuku yeMi MIX 3
UXiaomi ubhengeze ukuba imo yasebusuku yeXiaomi Mi Mix 3 iza kuza kwiMi 8 Lite, eyona nguqu incinci kuthotho lweMi 8.
I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition izakuqalisa kungekudala kwihlabathi liphela
Ngaphezulu kweenyanga ezintandathu emva kokuphehlelelwa, uXiaomi angagqibela aphehlelele iMi 8 Explorer Edition engaphandle kwe China, ngokokufumanisa okutsha.
Ukucoca iprototype ekucingelwa ukuba iXiaomi Mi 9: Ngaba inayo umfundi weminwe ngasemva?
Kuvele ukuvuza okutsha kweXiaomi Mi 9. Oku malunga neprototype yayo, eza nomfundi ofaka iminwe ebekwe ngasemva.
URedmi usebenza kwi-smartphone ene-Snapdragon 855
Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zeRedmi ngoku esebenza kwimodeli yayo yokuqala ephezulu enokuba ne-Snapdragon 855 ngaphakathi.
UXiaomi unika ibhetri ephathekayo ngokutshaja ngaphandle kwamacingo
Fumanisa ngakumbi malunga nebhetri entsha ephathekayo uXiaomi ayivelileyo eza nokutshaja ngaphandle kwamacingo okubandakanyiweyo kwaye kuthengisiwe eTshayina.
Umongameli we-Redmi kunye ne-Sekela Mongameli we-Xiaomi Group basungule uphando olutsha ukufumana eyona nto ikhethiweyo yoyilo olupheleleyo.
Nantsi indlela esebenza ngesilayidi semagneti yeXiaomi Mi MIX 3: nguJerryRigEverything [Ividiyo]
I-youtuber eyaziwayo uJerryRigEverything idibanise isilayidi semagneti yeXiaomi Mi MIX 3 kwaye yafumanisa iinkcukacha ezinomdla.
Ukuchazwa kweXiaomi Mi Max 4 kuchaziwe
Ukuba ufuna iselfowuni ngescreen esikhulu, yiya ucinga ngeXiaomi Max 4 kunye nee-intshi zayo ezingaphezu kwe-7. Iya kufika kwiimodeli ezimbini ezahlukeneyo.
I-Redmi Go sele ihanjisiwe ngokusemthethweni
Fumana ngakumbi malunga neRedmi Go, ifowuni yefowuni yokuqala ene-Android Go eneenkcukacha esele zenziwe ngokusemthethweni.
I-Redmi Go iza kuphehlelela eYurophu ngoFebruwari
Fumana ngakumbi malunga nexabiso eliza kuba nalo iRedmi Go kumsitho wayo eYurophu ukongeza kumhla wokuqaliswa oya kuba nawo.
UXiaomi ulungiselela iMi 9 ngoFebruwari ngescreen senzwa yeminwe eskrinini
Ngokufanelekileyo iXiaomi Mi 9 iya kuziswa ngoFebruwari kunye ne-sensor yeminwe elindelekileyo kwiscreen esingaphambili.
I-Redmi X ibhengeziwe nge-15 ezayo kaFebruwari [Iphepha]
Ipowusta yeRedmi X ivele eWeibo, ibhengeza ukufika kwayo ngoFebruwari 15 olandelayo ngenzwa yeminwe ekwi-screen.
I-Redmi Go ivuza ngokupheleleyo ngaphambi kokumiliselwa kwayo
Fumanisa ngakumbi malunga neRedmi Go, i-smartphone entsha esezantsi esezantsi esuka kuhlobo lwesiTshayina oluza kuza ne-Android Go, iinkcukacha zayo esele zivuziwe.
Ifowuni yokuqala kaXiaomi eguqukayo ityhilwa yi-CEO [Ividiyo]
Ukusonga i-smartphone kaXiaomi kuye kwavuza ividiyo kwisekela mongameli wenkampani. Siyakwandisa! [Ividiyo]
UXiaomi uceba nokungena kwintengiso e-Afrika
Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zikaXiaomi zokungena kwintengiso e-Afrika kamva kulo nyaka apho banethemba lokuthengisa kakuhle.
I-Pocophone F1 ifumana inkxaso yokurekhoda okucothayo kwevidiyo kwi-fps ezingama-960 kunye neMowudi yoBusuku yokuthatha iifoto ngokukhanya okuphantsi.
IXiaomia isandula ukuvula iVenkile yayo enkulu eYurophu. Ivenkile entsha yavulwa kwisitalato iChamps-Elysees, eParis, eFrance.
Ezi ziifowuni zeXiaomi eziza kuhlaziya kwiPie yePie
Fumana ngakumbi malunga noluhlu lweemodeli zeXiaomi esele iqinisekisile uhlaziyo kwiPie ye-Android kwiinyanga ezizayo ngokuzinzileyo.
IXiaomi Mi Mix 3 iyasinda kuvavanyo lokuqina kweJerryRigEverything
IXiaomi Mi Mi x 3 iphantsi kovavanyo olunzima lovavanyo lweJerryRigEverything kwaye ibadlulise ngaphandle kwengxaki. Bona zonke iinkcukacha apha!
Umxholo omtsha weXiaomi MI 9: ii-bezels ezimbalwa kunye nenotshi encinci yokuhamba emanzini
Ingcamango entsha yeXiaomi Mi 9 ibonisa ukuba i-smartphone yeflegi elandelayo yenkampani iya kuza ne-bezels encinci kunye nenotshi encinci ye-Waterdrop.
Iyintoni imfihlo yescreen seRedmi Qaphela 7 ukuba inganyangeki?
Sichaza izizathu zokuba kutheni isikrini seXiaomi sikaRedmi Qaphela 7 sixhathise kakhulu ngaphandle kwexabiso eliphantsi.
UXiaomi kunye no-Oppo bazise ngokuzimeleyo isizukulwana esitsha sokufunda iminwe esikrinini esikwaziyo ukugubungela indawo enkulu kwiscreen.
Fumana ngakumbi malunga nomhla wokubonisa wenguqulo ye5G yeXiaomi Mi MIX 3 ecwangciselwe ukuphela kukaFebruwari, ngaphambi kweMWC 2019.
Inqaku leRedmi 7 liya kufumana iNkqubo yoBume beXesha leXiaomi Mi Mix 3 ngohlaziyo
Inqaku leRedmi 7 liya kufumana imbonakalo yeNdlela yeMo yoBume beXiaomi Mi Mix 3 ngohlaziyo oluzayo. Oku kuqinisekisiwe kwi-Weibo.
Ukulindelwa kweNqaku leRedmi 7 liphezulu: isitokhwe sefowuni sisigidi esinye kule nyanga nje
Inqaku elibomvu leRedmi 7 linesitokhwe esiphezulu sokuthengisa kwayo ngoJanuwari. Oku kuqinisekisiwe nguMlawuli weMveliso, ukuthomalalisa ezinye iinkxalabo.
UXiaomi uqinisekisa ukuba iSurge S2 ayirhoxiswanga
Fumanisa ngakumbi malunga nokwenziwa kweSurge S2, isizukulwana sesibini seeprosesa zikaXiaomi eziqhubekayo njengoko uphawu lutshilo.
Vula ubhaliso lwe-beta yePie ye-Android kwiRedmi Qaphela i-5 kunye nezinye iimodeli
Xiaomi Redmi Qaphela 5 kunye nezinye iimodeli zivunyiwe kwinkqubo entsha ye-Android Pie beta. Sandisa iinkcukacha!
UXiaomi ufikelela kwiibhanki zamandla ezizigidi ezili-100 ezithengisiweyo
Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengiswa kweebhanki zamandla zeXiaomi kwihlabathi liphela ezibe yimpumelelo enkulu yohlobo lwaseTshayina.
UXiaomi uqinisekisa ukuba bayasebenza kwi-MIUI 11
Fumana ngakumbi malunga ne-MIUI 11, uphuhliso lwayo esele luqalile ngokusemthethweni njengoko iqinisekisiwe nguXiaomi uqobo kunye neendaba zayo.
Inqaku leRedmi 7 liphantsi kovavanyo olunzima lokunyamezela kwaye liyabadlula [Ividiyo]
Inqaku leRedmi 7 liphantsi kovavanyo olwahlukileyo ukubonisa ukuba isikrini somelele: iyamelana nokothuka kunye nokuxhatshazwa.
URedmi usebenza kwiflegi ye-euro engaphezu kwama-300
Uphawu olutsha oluzimeleyo lweRedmi lusebenza kwi-flagship efowuni efikelelekayo, eya kuthi ibize ngaphezulu kwe-euro ezingama-300.
Uphawu lukaXiaomi lweRedmi luzimele ngokusemthethweni: U-Lu Weibing wonyulwa njenge-CEO yalo
UXiaomi usandula ukubhengeza ukuba uLu Weibing, owayesakuba ngumongameli wenkampani yaseTshayina iGionee, uzakuphakamisa uphawu lweXiaomi oluzimeleyo.
Fumanisa ngakumbi malunga neRedmi Qaphela 7, ifowuni entsha yohlobo lwaseTshayina njengophawu oluzimeleyo kwaye olufikelela kwinqanaba eliphakathi.
UXiaomi uzakuvula imveliso eyimfihlakalo eyongezelelweyo ngomso: Ngaba iya kuba yenye ifowuni yeRedmi?
UXiaomi uzokwazisa imveliso engaqondakaliyo ngomso, ngaphandle kweRedmi Qaphela 7, ifowuni ebilindile. Isenokuba yenye iRedmi
IPocoPhone F1 iphucula ikhamera yayo ngemisebenzi emitsha
Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo olukhutshelwa iPocoPhone F1 enceda ikhamera yefowuni ukuba ifumane imisebenzi emitsha.
IXiaomi Black Shark Skywalker, iinkcukacha zokuqala zomnxeba wokudlala olandelayo
Ifowuni entsha yokudlala yeXiaomi, phantsi kwegama Xiaomi Black Shark Skywalker, ivele kwi-geekbench ebonisa inxenye yezixhobo zayo.
I-Xiaomi Mi Air Dots Pro: Ii-headphone ezintsha zohlobo
Fumanisa ngakumbi ngeXiaomi Mi Air Dots Pro, ii-headphone ezintsha ezingenazingcingo zohlobo lwesiTshayina, esele zinikezelwe ngokusemthethweni.
I-Xiaomi Black Shark Skywalker, isiphelo esilandelayo senkampani evuzayo kwiGeekbench
I-smartphone entsha yeXiaomi, enombhalo othi "Blackshark Skywalker", ivele kwiGeekbench kutsha nje nge-Snapdragon 855.
IXiaomi Mi MIX 3 ifika eSpain ngokusemthethweni
Fumana ngakumbi malunga neXiaomi Mi MIX 3 esele imiselwe ngokusesikweni eSpain ngexabiso elikhulu lokwazisa okwethutyana.
UXiaomi ubhengeze ukumiliselwa kwefowuni yeRedmi ngokudibana neTikTok
UXiaomi ubhengeze ngokusesikweni, ngokusebenzisa uWeibo, ubuhlakani bobuchule kunye neTikTok ukumiliselwa kwemodeli yeRedmi.
Ukucoca uyilo kunye neempawu zeXiaomi Redmi Qaphela i-7 ngescreen esingenakwaphuka
Inxalenye yeempawu zeXiaomi Redmi Qaphela i-7 iye yavuza, ukongeza kuyilo lwayo kunye nevidiyo ebonisa isikrini sayo esingenakuqhekeka.
I-Xiaomi Mi Power Bank 3: Ibhetri entsha yangaphandle
Fumanisa ngakumbi ngeXiaomi Mi Power Bank 3, ibhetri entsha yangaphandle yohlobo lwaseTshayina esele luboniswe ngokusemthethweni e China.
Fumanisa ngakumbi malunga nedatha yokuqala yeXiaomi Mi A3, isizukulwana sesithathu seefowuni zeXiaomi ezisebenzisa i-Android One njengenguqulelo emiselweyo.
I-MIUI 10.2.1 ikhutshelwe iXiaomi Mi MIX 3: iingxaki ezininzi zisonjululwe
Uhlaziyo olutsha lwe-MIUI 10 lufikile kwi-Xiaomi's Mi MIX 3 smartphone; oku kulungisa iingxaki ezininzi kwaye kuphucula amanye amacandelo.
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 9, iflegi elandelayo yenkampani, kuhluziwe
Ukucaciswa kobuchwephesha kunye neempawu eziphambili zeXiaomi Mi 9 ziye zavuza. Iya kufika nge-Snapdragon 855, ikhamera yangemva kathathu, nokunye okuninzi.
Ividiyo ebonisa ukuba iXiaomi isonga iselfowuni
Ividiyo ivuliwe ibonisa ukuba yeyiphi i-Xiaomi yokuqala yokusonga i-smartphone, ividiyo engenakuqinisekiswa njengeyinyani.
UXiaomi uza kuzisa imodeli entsha yoluhlu lweRedmi ngoJanuwari 10
Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni entsha kuluhlu lweXiaomi's Redmi olubhiyozelwa ngokusesikweni ngoJanuwari 10.
Uhlaziyo kwi-Android Pie inika iingxaki kwiXiaomi Mi A1
Fumanisa ngakumbi malunga neengxaki ezivelisiweyo kwiXiaomi Mi A1 emva kokufika kohlaziyo lwePie Android kwisixhobo.
UXiaomi uhlaziya ikhamera yeMi 8 ngemisebenzi emitsha
Fumanisa ngakumbi malunga nohlaziyo oluza Xiaomi Mi 8 khamera eyazisa ezimbini zokuphucula ekusebenzeni kwayo.
IXiaomi Mi 9 kunye neMi MIX 4 beza kufika nekhamera kathathu nokunye okuninzi
Inxalenye yeempawu zeXiaomi Mi 9 kunye neXiaomi Mi MIX 4 zihluziwe, eziza kubonakala kwizixhobo zazo ezinamandla kunye nenkqubo yekhamera engasemva kathathu.
Ungazikhubaza njani iintengiso zeXiaomi kwi-MIUI
Fumanisa amanyathelo ekufuneka elandelwe ukuphelisa iintengiso ezivela kwifowuni yakho yeXiaomi kunye nenkqubo ekusetyenzwa kuyo.
Xiaomi Mi Dlala: Ifowuni entsha yohlobo lwesiTshayina
Fumanisa ngakumbi malunga neXiaomi Mi Dlala, inqanaba elitsha lokungena kwifowuni esele ivelisiwe ngokusemthethweni.
Ngoku ungayihlaziya iXiaomi Redmi Qaphela 3 kwi-MIUI 10!
Ngaba unayo iXiaomi Redmi Qaphela 3? Ewe, sikulethela iindaba ezimnandi: ngoku ungayihlaziya ifowuni yakho kwi-Android 9 Pie nge-MIUI 10.
Uyilo lweXiaomi Play lubonakalisiwe kwimifanekiso esemthethweni
Uyilo lonke lweXiaomi Play luye lwavuza, lubonisa zonke iirves zesixhobo kunye neenkcukacha zomnxeba.
Uyifaka njani i-Android Pie ezinzileyo kwiXiaomi Mi A2: phakathi kwebanga ufumana uguqulelo ngokusemthethweni
IXiaomi Mi A2 iqala ukufumana iPie ye-Android ngendlela ezinzileyo ukuza kuthi ga namhlanje. Yazi zonke iinkcukacha zezi ndaba.
IXiaomi Play, esinye isiphelo sendlela esivuzayo kwi-TENAA eza kuphehlelelwa kungekudala
UXiaomi sele eza kuvula i-smartphone entsha kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, kwaye iyi-Xiaomi Play. Oku kubhalisiwe kunye ne-TENAA kwaye kuya kufika nge-24 kaDisemba.
UXiaomi ulungiselela i-smartphone entsha ekumgangatho ophakathi: iya kuba yinxalenye yochungechunge lweRedmi 7
Ifowuni entsha yeXiaomi ibhalisiwe kwindawo yogcino lwedatha ye-TENAA: isenokuba yiRedmi 7 Pro, ibanga eliphakathi eliza kuqaliswa kungekudala.
Umahluko omangalisayo weXiaomi ucociwe kwinethiwekhi: ngaba ziya kuvela kwiRedmi 7?
Iindidi ezahlukeneyo zeXiaomi Redmi 7 ziye zaqinisekiswa. Iiprotokholi zabo zokulayisha sele zifana. Siyakwandisa!
UXiaomi uhlengahlengisa ibhodi yabalawuli kwakhona: UWang Chuan ngumongameli omtsha wenkampani e-China
I-Xiaomi ihlengahlengisa abaphathi bayo abaphezulu kwaye yazisa umongameli omtsha kwindawo yorhwebo yase China, kunye nolunye utshintsho kwizikhundla ezahlukeneyo.
Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka njani i-MIUI 10.1 nge-Android Pie ezinzileyo kwiPocophone F1
I-MIUI 10.1 ene-Android 9.0 Pie ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa kwiPocophone F1. Sichaza indlela yokuyifaka!
Inguqu ezinzileyo ye-Android Pie iqala ukufika kwiXiaomi Mi A1
Fumana ngakumbi malunga nokufika kwenguqu ezinzileyo ye-Android Pie kwiXiaomi Mi A1, kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokuba i-beta ifikile emnxebeni.
I-beta ye-Android Pie iqala ukufika kwiXiaomi Mi A1
Fumana ngakumbi malunga nokufika kwe-Android Pie beta kwiXiaomi Mi A1, isizukulwana sokuqala sophawu lwesiTshayina ukuba sibe ne-Android One.
Uyifaka njani i-MIUI 10.1 nge-Android Pie ezinzileyo kwiXiaomi Mi 8 kunye neMi 8 Explorer: uhlaziyo lufikelela kwesi sibini
UXiaomi ukhupha uhlaziyo kwi-Mi 8 kunye neMi 8 Explorer eza ne-EMUI 10.1.2 kunye ne-Android 9.0 Pie ezinzileyo.
Uyifaka njani ingxelo ezinzileyo ye-MIUI 10 kwiXiaomi Mi 5S Plus: uluhlu olutsha lufika kwiselfowuni
Ngoku unokukhuphela kwaye ufake ingxelo ezinzileyo ye-MIUI 10 kwiXiaomi Mi 5s Plus: siza kuchaza ukuba yeyiphi inkqubo ekufuneka uyenzile.
[APK] Uyifaka njani ikhamera yePixel 3 kwiXiaomi Mi A1
Isifundo esilula esichaza ukuba uyifaka njani ikhamera yePixel 3 kwiXiaomi Mi A1 ukuze ukonwabele izibonelelo zeapp.
Uluhlu lweevenkile zeXiaomi eSpain: Lonke ulwazi malunga nazo
Fumanisa uluhlu olupheleleyo lwevenkile zeXiaomi eSpain ukuze wazi ukuba yeyiphi ekufuphi kwindawo ohlala kuyo. Gcwalisa uluhlu.
Uhlaziyo lweXiaomi Mi 8 Lite kwi-MIUI 10 eSpain
Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo kwi-MIUI 10 efika ngokusesikweni eSpain kwiXiaomi Mi 8 Lite, phakathi kuluhlu lwegama laseTshayina.
Ngaba iXiaomi Mi A2 ineengxaki zesantya sokugcina?
Fumanisa ngakumbi malunga nengxaki echaphazela ezinye iimodeli zeXiaomi Mi A2 kwaye uninzi lwabasebenzisi bakhalaza malunga neenethiwekhi namhlanje.
I-MIUI 10 beta ene-Android Pie iza kwiPocophone F1
Fumana ngakumbi malunga nokufika kwe-Android Pie beta nge-MIUI 10 ngoku eza kwiPocophone F1. Inguqu ezinzileyo iyeza kungekudala.
Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale nguqulelo ikhethekileyo yePocophone F1 Armored eSpain apho inokuthengwa ngokusemthethweni.
[APK] Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka njani ikhamera yePixel 3 kwiPocophone F1 kunye neXiaomi Mi 8
Ifayile ye-apk yekhamera yeGoogle Pixel 3 ngoku iyafumaneka ukukhuphela kunye nokufakwa kwiPocophone F1 kunye neXiaomi Mi 8.
IXiaomi Mi 8 Pro kunye neMi 8 Lite zifika eSpain
Fumanisa ngakumbi malunga nokumiliselwa kweXiaomi Mi 8 Pro kunye neMi 8 Lite ngokusemthethweni eSpain kunye namaxabiso abo asemthethweni okuthengisa.
IXiaomi Black Shark Helo, isizukulwana sesibini sentsimbi yokudlala yaseTshayina, ayizukumiselwa eYurophu, ubuncinci okwangoku.
Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokumiliselwa kweXiaomi Black Shark eYurophu, eyabhengezwa yinkampani. Yaziswa kumazwe angama-28 kubandakanya neSpain.
I-MIUI 10 sele ifumaneka ngaphezulu kweefowuni ze-Xiaomi ezingama-30. Jonga uluhlu olupheleleyo lwezi smartphones ezihambelana nale nguqulo.
Isifundo esichaza indlela yokufaka iPie ye-Android kwiPocophone F1. Le nguqulo intsha iza kwifom ye-beta yesixhobo kwaye iphantsi kwe-MIUI 10.
Kungekudala uza kuba nakho ukuhlaziya iPocophone F1 kwiPie ye-Android 9
UXiaomi uqinisekisile ukuba kule veki siza kuba nakho ukuhlaziya iPocophone F1 kwi-Android 9 Pie enkosi ngokufika kwe-MIUI 10.
IXiaomi Mi Mix 3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina esiboniswe namhlanje.
Umdlalo omtsha weXiaomi Black Shark ngoku usemthethweni. Funda konke malunga nefowuni yokuqala kwintengiso ene-10 GB ye-RAM.
IXiaomi Mi Mix 2S iya kuba sisiphelo sokuqala senkampani yaseAsia ukufumana i-Android Pie, kwaye iyakwenza njalo kwiintsuku ezizayo.
Umhla wokubonisa weXiaomi Black Shark 2 usemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubonisa wohlobo lomdlalo weqonga weTshayina.
IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ifika eSpain ngokusemthethweni
IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro yaziswa ngokusesikweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokufika kweefowuni zekhamera ezine eSpain.
Inguqu ezinzileyo yesiqalisi sePOCO ngoku iyafumaneka. Fumanisa ngakumbi malunga nale Pocophone F1 isindululi ngoku efumaneka kwiVenkile yokudlala.
IXiaomi Mi 8 idlula iiyunithi ezizigidi ezi-6 ezithengisiweyo. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso ephezulu yeshishini laseTshayina kwihlabathi liphela.
IXiaomi Mi A2 ineengxaki zebhetri
Iingxaki ngokusetyenziswa kwebhetri kwiXiaomi Mi A2. Fumana ngakumbi malunga neziphene amava akho efowuni kunye nebhetri yayo.
Sele siwazi umhla wokubonisa weXiaomi Mi Mix 3. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokufika kwesiphelo esiphakamileyo seXiaomi.
Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro: Ifowuni entsha yeXiaomi ngoku isemthethweni
Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa. Fumanisa yonke into malunga noluhlu olutsha lweXiaomi oluphakathi esele lukhona eAsia.
Ukuqaliswa kwamazwe aphesheya kweXiaomi Mi 8 Lite kuqala ukubhengezwa. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni kumazwe aphesheya.
IXiaomi Mi 8 Pro izakwaziswa kungekudala ngaphandle kwe China
IXiaomi Mi 8 Pro izakwaziswa ngaphandle kwe China ngokusemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nokumiliselwa kwesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina.
UXiaomi umisa uhlaziyo kwi-Android 8.1 Oreo yeXiaomi Mi A1
Ukurhoxisa uhlaziyo kwi-Android 8.1 Oreo yeXiaomi Mi A1. Fumana ngakumbi malunga neempazamo eziye zavela ezikhokelele ekurhoxisweni kwayo.
I-Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition reserves ifikelela kwisigidi esi-1,67
I-Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku uHlelo oluKhethekileyo ine-1,67 yezigidi ezigcinakeleyo. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yolu shicilelo lukhethekileyo lwefowuni.
Ukuhlaziywa kweXiami Mi A1 ukuya kwi-Android Ore 8.1 ngoku iyafumaneka kodwa ineengxaki
Lonke uhlaziyo oluqaliswa ngabavelisi kwizixhobo zabo eziphathwayo, ngaphambili ludlula kwisigaba se-beta, isigaba kwi ...
I-MIUI 10 Beta yeHlabathi: uluhlu lweefowuni zeXiaomi eziya kuthi zihambelane kunye nemihla yokuhlaziya kwazo
Ekuqaleni kwenyanga, sikwazise malunga noluhlu olusemthethweni uXiaomi asinike lona apho kubonakala khona izixhobo eziphathwayo eziya kuba Xiaomi ityhile uluhlu olutsha lwezixhobo eziya kuthi zihambelane neMIUI 10 Beta yeHlabathi. Yazi imihla yabo yokuhlaziya!
UXiaomi uza kuvula iivenkile ezimbini ezintsha eSpain ngoJulayi 7
UXiaomi uza kuvula iivenkile ezimbini ezintsha eSpain ngoJulayi 7. Fumanisa ngakumbi malunga neevenkile eziya kuvulwa luhlobo lwaseTshayina ngeveki.
UXiaomi, omnye wabavelisi beefowuni abaphezulu abahlanu, wakwazi ukuthengisa malunga neeyunithi ezizigidi ezintlanu zeRedmi Qaphela 5 kunye neRedmi Qaphela 5 ProXiaomi, inkampani yaseTshayina, uxele ukuba ikwazile ukuthengisa iiyunithi ezizigidi ezintlanu zeXiaomi Redmi Qaphela 5 kwaye Xiaomi Redmi Qaphela i-5 Pro e-India.
Ityhile ixabiso lentengiso leXiaomi Mi Max 3
IXiaomi Mi Max 3 iya kuba nexabiso lokuthengisa nge-1.699 yuan. Fumana ngakumbi malunga nexabiso eliza kuba nalo ifowuni entsha yohlobo lwesiTshayina.
IXiaomi Mi A2 iqinisekisiwe yiTaiwan NCC
UXiaomi sele ebonakala ngathi ukulungele iXiaomi Mi A2, kwinqanaba elilandelayo eliphakathi lenkampani. Esi sixhobo, emva kokuqinisekiswa eSingapore, sifumana iXiaomi Mi A2 eqinisekisiwe eTaiwan yiNCC. Ukongeza, kupapasho olunikezwe kwiforum yenkampani, iya kuboniswa ngoJulayi 24.
IXiaomi Mi Band 3 ithengisa iiyunithi ezizigidi ngeentsuku ezili-17
IXiaomi Mi Band 3 ifikelela kwisigidi esithengisiweyo. Fumanisa ngakumbi malunga nokuphumelela kwesizukulwana esitsha seXiaomi bracelets e China.
Umcimbi omtsha weXiaomi ngoJulayi 24: Xiaomi Mi A2 ifikile
IXiaomi Mi A2 iya kuziswa ngokusesikweni ngoJulayi 24. Fumana ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yefowuni entsha kraca.
Ukucaciswa okutsha kwe-Xiaomi Mi Max 3
UXiaomi unokumilisela iinguqulelo ezimbini zeXiaomi Mi Max 3. Fumana ngakumbi malunga neenguqulelo ezimbini ezikhoyo zefowuni entsha.
IXiaomi Redmi 6 Pro ngoku isemthethweni, yazi zonke izinto zayo
Sikuxelela zonke iinkcukacha ezisemthethweni zeXiaomi Redmi 6 Pro, ixabiso kunye nokufumaneka kwintengiso yehlabathi
Xiaomi Mi Pad 4: Ithebhulethi entsha yohlobo lwesiTshayina
Xiaomi Mi Pad 4: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga neethebhulethi entsha yohlobo lwesiTshayina olwazisiweyo namhlanje.
IXiaomi Mi 8 ifikelela kwisigidi seiyunithi ezithengisiweyo
IXiaomi Mi 8 ithengisa iiyunithi zesigidi kwiiveki ezimbini. Fumana ngakumbi malunga nempumelelo yezi fowuni kwimakethi yaseAsia.
Ityhile imifanekiso yokuqala esemthethweni kunye nexabiso leXiaomi Redmi 6 Pro
I-Xiaomi Redmi 6 Pro: Ividiyo evuzayo, imifanekiso kunye nexabiso. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina oluya kuboniswa kwiveki ezayo
Ityhile ixabiso leXiaomi Mi Pad 4
IXiaomi Mi Pad 4: Ityhile amaxabiso ezi nguqulelo zimbini. Fumana ngakumbi malunga neendleko eziza kubakho ithebhulethi yohlobo lwesiTshayina xa ihlasela imakethi
IXiaomi Mi Pad 4 iya kuziswa ngalo mhlaka-25 kweyeSilimela
Ukongeza kwintetho yeRedmi 6 Pro eza kwenzeka kwiintsuku nje ezintlanu e-China, ifemi iya kuthi thaca ithebhulethi yayo entsha, iXiaomi izokwazisa ithebhulethi yayo entsha nge-25 ezayo kaJuni. Sithetha ngeMi pad 4, indlalifa yeMi Pad 3
IXiaomi Redmi 6 Pro iya kuziswa ngoJuni 25
IXiaomi Redmi 6 Pro iya kuziswa ngokusesikweni ngoJuni 25. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubonisa wenqanaba elitsha eliphakathi kuhlobo lweshayina.
IXiaomi Mi 8 yayiza kuphehlelelwa eSpain ngo-Agasti
IXiaomi Mi 8 izakufika eSpain ngo-Agasti. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwesiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina kwilizwe lethu.
Nantsi indlela iXiaomi Mi Max 3 eya kujongeka ngayo
Umvelisi wamatyala uye wavuza ukuba iyakuba yintoni iXiaomi Mi Max 3, isixhobo esingange-6,99-intshi esingafanele sithathe ixesha elide ukuba sibekwe ngokusemthethweni.
UXiaomi uza kuvula ivenkile entsha eMadrid kule veki
UXiaomi uza kuvula ivenkile yakhe entsha eMadrid ngalo Mgqibelo. Fumanisa ngakumbi malunga nokuvulwa kwevenkile entsha yamaTshayina kwilizwe lethu.
Ixabiso elicociweyo kunye nomhla wokukhutshwa kweXiaomi Mi A2
IXiaomi Mi A2: Ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa kuvuza. Fumana ngakumbi ngamaxabiso alindelekileyo kwifowuni entsha ye-Android One.
IXiaomi Redmi 6 kunye ne-6A ayizukubona inzwa ye-infrared
IXiaomi Redmi 6 kunye ne-6A ayizukubona inzwa ye-infrared. Fumana ngakumbi malunga notshintsho oluza kwenzeka kwiifowuni ezimbini zohlobo lwesiTshayina.
IXiaomi Mi A1 iqala ukuhlaziya kwi-Android 8.1 Oreo
I-Android 8.1 Oreo iqala ukufika kwiXiaomi Mi A1. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluqala ukufikelela kubasebenzisi be-beta kwangoku ngoku.
IXiaomi Black Shark isungulwe ngombala omtsha ohlaza okwesibhakabhaka
I-Xiaomi's Black Shark isungula e-China ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Fumanisa ngakumbi malunga nenguqulelo entsha yohlobo lomdlalo bhanyabhanya waseTshayina opapashiweyo.
IXiaomi Redmi 6 kunye neRedmi 6A: Iifowuni ezintsha zosapho lakwaRedmi
IXiaomi Redmi 6 kunye neRedmi 6A: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga neemodeli zohlobo oluphakathi lweebrendi.
IXiaomi Mi Max 3 sele iqinisekisiwe e-China
IXiaomi Mi Max 3 sele iqinisekisiwe e-China. Fumana okunye malunga nokuqinisekiswa kwefowuni, esazi ngayo ukucaciswa kwayo.
IXiaomi Redmi 6 entsha iya kuziswa ngoJuni 12
IXiaomi Redmi 6 iya kuziswa ngokusesikweni ngoJuni 12. Fumanisa ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni entsha kuphawu lwesiTshayina.
IXiaomi Mi 8 ithengisa ngaphandle komzuzu e-China
IXiaomi Mi 8 ithengisa ngemizuzwana engama-37 kusuku lwayo lokuqala e-China. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yesiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina kuphehlelelo lwayo kwilizwe lakho.
UXiaomi uza kuphehlelela i-MIUI 10 nge-7 kaJuni
Umaleko omtsha wobuntu obuvela kwiXiaomi ukuya kwiMui 10, uza kuqala ukukhutshwa kwihlabathi liphela ngoJuni 7.
IXiaomi Mi Band 3 igcinwe amaxesha angama-640.000 e-China
IXiaomi Mi Band 3 ifumana ukugcinwa okungama-640.000 e-China. Fumana ngakumbi malunga nempumelelo yesongo kwilizwe lakho apho ufumene khona ubhukisho ngaphambi kokuthengiswa kwalo kokuqala.
Ukucoca okokuqala kweXiaomi Mi A2 Lite
IXiaomi Mi A2 Lite: Uvuza uyilo kunye neenkcukacha zalo. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluza kuthengiswa kungekudala.
Uluhlu olusemthethweni lweefowuni zeXiaomi ziyahambelana neMIUI 10
Yazi uluhlu olutyhilwe yinkampani apho iifowuni eziphathwayo esele zihambelana neMIUI 10 ziqinisekisiwe, kunye nezo ziya kuhambelana ekupheleni kukaJuni noJulayi.
Sinikela kuwe iXiaomi Mi 8 Explorer Edition, uguqulelo olunamandla ngakumbi lweMi 8 enezinto ezintsha ezingazange zibonwe kwezinye iifowuni.
IXiaomi Mi Band 3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nesongo esitsha seXiaomi esele sinikezelwe namhlanje kumsitho wentsimbi yaseTshayina.
I-Xiaomi Mi 8 SE: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi lwegama lesiTshayina eliphefumlelwe yiXiaomi Mi 8 kwaye sele inikezelwe kumnyhadala namhlanje.
I-MIUI 10: Ulwahlulo olutsha lweXiaomi. Fumanisa izinto ezintsha ezithi le nguqulo intsha isishiye ngokubheja kuyilo oluhlaziyiweyo olufana ne-Android P.
Xiaomi Mi 8: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa okungakumbi malunga nefowuni entsha ephezulu evela kuphawu lwaseTshayina esele lubonisiwe namhlanje.
UXiaomi uyiphinda kabini intengiso yakhe kwikota yokuqala ye-2018. Fumanisa ngakumbi malunga nokuvela kweentengiso zorhwebo lwaseTshayina kwikota yokuqala yalo nyaka, esele iphindwe kabini kwintengiso yazo kwaye ingowesine othengisa kakhulu.
Ukucocwa kweempawu zokuqala zeXiaomi Mi 8 SE
I-Xiaomi MI 8 SE: Ukucaciswa kokuqala kokuvuza. Fumana ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluthembisa ukuba yinguqulelo echetyiweyo yesiphelo esiphakamileyo kwaye sinokwazi ngokusemthethweni ngomso.
IXiaomi Mi 8 izakufika ngokusemthethweni eSpain
IXiaomi Mi 8 izakwaziswa ngokusesikweni eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwefowuni ephezulu ukusuka kuphawu lwesiTshayina ukuya eSpain nakwamanye amazwe asixhenxe.
Ixabiso leXiaomi Mi Band 3 sele livuziwe Fumanisa ngakumbi ngexabiso eliza kubakho isongo sophawu lwesiTshayina xa lifika kwintengiso.
I-Xiaomi Redmi 6 Pro: ukucaciswa kunye neempawu ezivuzayo zeselfowuni elandelayo
UXiaomi ukwindawo ebonakalayo kwakhona. Ngeli xesha, kubonakala ngathi inkampani yaseAsia ephumelele kakhulu ine-Xiaomi Redmi 6 Pro isilungele.
I-Xiaomi Mi 8: Iifoto ezivuzayo zoyilo lwayo, ibhokisi kunye ne-animojis ziqinisekisiwe
I-Xiaomi Mi 8: Uyilo, ibhokisi kunye ne-animojis evuzayo ngaphambi kokumiliselwa kwayo. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina apho idatha ezininzi sele zivuthiwe ngaphambi kokufika kwazo kwintengiso.
IXiaomi Mi Band 3 iya kuziswa ngoMeyi 31
Iqinisekisiwe: UXiaomi uza kuzisa iXiaomi Mi Band 3 ngoMeyi 31. Fumanisa ngakumbi malunga nomsitho wokwenza uphawu lwentengiso yaseTshayina apho sinokulinda khona ukuba ubonise isongo sakho.
IXiaomi Mi 8 iya kuba yi-smartphone yokuqala ene-GPS ephindwe kabini
I-Xiaomi's flagship elandelayo, i-Mi 8, iya kuba sisiphelo sokuqala emhlabeni ukufikelela kwimarike nge-GPS-frequency frequency, i-GPS chip amaxesha angama-16 ngokuchanekileyo kunesiqhelo.
Isityholo sokuvuza kweXiaomi Redmi 6 kwi-TENAA
Isityholo seXiaomi Redmi 6 sisandula ukuvuza kunye neempawu zayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha kwiwebhusayithi esemthethweni ye-TENAA. Esi sixhobo siza kuphumelela iRedmi 5, yenye yezona ndawo zidumileyo ziphakathi zenkampani yaseTshayina namhlanje. Sandisa iindaba kuwe!
Iimpawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha zeXiaomi Mi 8 zivuzekile ngaphambi kokunikezelwa kwayo
IXiaomi Mi 8 ngaphambili ibisaziwa njengeMi 7- isandula ukuvuza kwi-Weibo kunye neempawu zayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha ngaphambi kokumiliselwa kwayo kwiintsuku ezimbalwa ezizayo eziza kwenzeka eTshayina. Sikwazisa!
UXiaomi uqinisekisa ukuba akuyi kubakho Xiaomi Mi 7
Iqinisekisiwe: Akusayi kubakho Xiaomi Mi 7, kuphela yi-Mi 8 eya kusungulwa.Fumana okuninzi malunga nesiqinisekiso sokuba siza kubona kuphela isiphelo esitsha kumnyhadala wentsimbi yaseTshayina.
Imifanekiso yokuqala yento eza kuba sisizukulwana sesithathu seXiaomi Mi Band 3 sele icociwe, kwaye apho ungabona uyilo lokuqhubeka kodwa ngescreen esinolwazi oluthe kratya.
I-MIUI 10 izakufika nge-31 kaMeyi kunye neXiaomi Mi 8
I-MIUI 10 iya kuboniswa ngokusesikweni ngoMeyi 31. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika koluhlu olutsha lomntu kwiifowuni zeXiaomi eziya kuthi zize kumsitho ocebe ukuba uphawu lwaseTshayina.
Iqinisekisiwe: iXiaomi Mi 8 iya kuziswa ngoMeyi 31
Kusemthethweni: IXiaomi Mi 8 iya kuziswa ngoMeyi 31. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni entsha evela kumenzi waseTshayina oza kufika kamva kule nyanga kumsitho wokutyikitya.
IXiaomi Mi Max 3 izakwaziswa ngoJulayi kulo nyaka
IXiaomi Mi Max 3 iya kufika kwintengiso ngoJulayi. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni entsha yaseTshayina eza kuthi thaca ngokusemthethweni kweli hlobo.
IXiaomi Redmi 5A yayiyeyona nto ithengiswa kakhulu kwihlabathi liphela ngo-Matshi
IXiaomi Redmi 5A yeyona fowuni yesithathu ithengiswa kakhulu kwihlabathi liphela. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yefowuni yohlobo lwesiTshayina, esisisixhobo esithengisa kakhulu se-Android.
UXiaomi uza kuzisa ifowuni yakhe entsha ngoMeyi 31
UXiaomi uza kuzisa iimveliso ezintsha ngoMeyi 31. Fumana ngakumbi malunga nomnyhadala wentetho yohlobo lwesiTshayina olulungiselela ukwazisa iimveliso ezintsha.
IXiaomi E6 ifunyenwe eGeekbench
Ukucoca okokuqala kweXiaomi E6. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina malunga nento eyayingaziwa kwaye esele ivele kwiGeekbench,
IXiaomi kunye neNokia se